Abashukela abaziwayo > Isifo sikashukela
Osaziwayo abane-Type 1 Diabetes
Isifo sikashukela asindeli muntu - noma abantu abajwayelekile, noma osaziwayo. Kepha abantu abaningi abakwazanga nje ukuhlala impilo ephelele, kodwa futhi bathola impumelelo enkulu emkhakheni wabo.
Mababe yizibonelo zonke zokuthi isifo sikashukela sikude kakhulu nesigwebo.
ISylvester Stallone: Leli qhawe elinesibindi lama-movie amaningi ezenzo linesifo sikashukela sohlobo 1. Kepha lokhu akumvimbeli ekwenzeni umsebenzi wakhe awuthandayo. Iningi lababukeli alicabangi nokuthi unesifo sikashukela.
UMikhail Boyarsky inj inj insulin nsuku zonke, futhi futhi inamathela ekudleni okuqinile. Ngaphezu kwalokho, ungumuntu oqondile futhi onamandla.
“Isifo sikashukela esingivimba ukuthi ngiqhume empilweni. ngabe iphilile, ingeke yenze lutho isikhathi eside. Ngiyasazi kahle isifo sami - imiphi imishanguzo okufanele yenziwe, yini. Manje sengiphila ngokuhambisana nalokho engikumiselwe. ”- kusho uMikhail Sergeevich ngokwakhe kwenye yezingxoxo zakhe.
Armen Dzhigarkhanyan ngigula isifo sikashukela sohlobo 2, esingaphazamisi ukusebenza njalo kumafilimu nokusebenza enkundleni yemidlalo yaseshashalazini. Ngokusho komlingisi, udinga ukunamathela ekudleni, uqhubekele phambili futhi ulalele imiyalo yabachwepheshe. Futhi-ke impilo izoqhubeka.
Iseluleko esivela e-Armen: Impilo yothando. Thola umsebenzi ozokunika amandla - bese uxineka, kanye nesimo esibi, kanye nobudala bazoyeka ukukhathazeka. Lokhu kuzosiza ukulawula isifo sikashukela. Futhi uvame ukubona ukusebenza okuhle!
I-Holly berry waba ngum-Afrika wokuqala wase-Afrika ukuthola i-Oscar. Isifo sikashukela asiphazamisi intombazane emsebenzini wayo. Ekuqaleni, wethuka ngemuva kokufunda ngalesi sifo, kodwa wakwazi ukuzisondeza ngokushesha.
Waba ngumodeli wokuqala omnyama ukumela iMelika emncintiswaneni kaMiss World. UHolly ubamba iqhaza mathupha emsebenzini wokusiza abantu futhi uyilungu leJuvenile Diabetes Association (funda ngalolu hlobo lwesifo sikashukela).
Itshe likaSharon ngaphezu kohlobo 1 sikashukela, i-asthma nayo iyahlupheka. Kabili inkanyezi yahlaselwa unhlangothi (ngengozi yokuthola isifo sohlangothi sikashukela, bheka lapha). Iminyaka eminingi ilandelana, ubelokhu eyiqaphelisisa impilo yakhe, akabuphuzi utshwala futhi ulandela imithetho yokudla okunempilo futhi uyangena kwezemidlalo. Kodwa-ke, ngemuva kokuhlaselwa imivimbo nokuhlinzwa, kwadingeka ukuthi ashintshe imithwalo esindayo ukuze asindise ukuqeqeshwa kwePilates, nakho okulungele ukubuyisa ushukela.
Yuri Nikulin - Umlingisi odumile waseSoviet, umculi odumile wesekisi, owina umklomelo futhi oyintandokazi yomphakathi nje. Abaningi babemkhumbula njengomuntu owenza izindima emafilimini athi "Isiboshwa SaseCaucasus", "The Arm Arm", "Operation Y" nabanye.
Emsebenzini wakhe kwi-cinema, uNikulin wayephethe ngokuphelele futhi wathi: "Amahlaya yindaba engathí sina". Akazange abekezelele ububi, ukuhaha namanga; wayefuna ukukhunjulwa njengomuntu onomusa.
Umlingisi wayegula futhi enesifo sikashukela. Akathandanga ukukhuluma ngakho, futhi nangaleso sikhathi ayemukelwa. Wakhuthazelela yonke imithwalo nezinkinga zempilo ngaphandle ngaphandle ezolile.
UFaina Ranevskaya, umculi wabantu we-USSR, umlingisi weshashalazi odumile nomlingisi wamafilimu, wafakwa kwabalingisi abaphambili abavelele kakhulu bekhulu lama-20 ngokusho kwe-encyclopedia yesiNgisi ethi "Ngubani ubani". Iningi lezitatimende zakhe seliphenduke ama-aphorisms angempela. Wayezama njalo ukuthola okuhlekisayo kukho konke, yingakho uRanevskaya waba ngomunye wabesifazane abamangalisa kakhulu benkulungwane edlule.
"Iminyaka engu-85 yesifo sikashukela ayilushukela"- kusho uFaina Georgiaievna.
UJean Renault - Umlingisi odumile waseFrance osedlale kumafilimu angaphezu kwangama-70. Waduma ngokudlala kumafilimu anjenge- “The Last Fight”, “Underground”, “Leon”. Umlingisi uyadingeka naseHollywood - wadlala izindima kumafilimu uGodzilla, Da Vinci Code, Aliens, njll.
UTom hanks, umlingisi wesimanjemanje waseMelika, owaziwa ngamafilimu athi "Outcast", "Forest Gump", "Philadelphia" nabanye, unesifo sikashukela sohlobo II, njengoba esanda kutshela umphakathi.
U-Ella Fitzgerald, umculi we-jazz owaziwa kakhulu waduma emhlabeni wonke futhi washona eneminyaka engama-79.
U-Alla Pugacheva ubelokhu ekwazi ukujabulisa abalandeli bakhe, futhi muva nje useqale ibhizinisi. Ngisho eminyakeni yakhe engama-66 uyakwazi ukujabulela impilo, yize enesifo sikashukela sohlobo 2 - manje usenakho konke - izingane, abazukulu kanye nomyeni osemncane! I-prima donna yesigaba saseRussia yafunda ngokuxilongwa kwakhe ngo-2006.
UFedor Chaliapin waduma hhayi nje ngokuba ngumculi, kodwa futhi waba ngumklami nomdwebi. Isabhekwa njengomunye wabaculi abadumile be-opera. UChaliapin wayenabafazi ababili nezingane eziyi-9.
BB King - umsebenzi wakhe wezomculo uthathe iminyaka engama-62. Ngalesi sikhathi wasebenzisa isibalo esimangazayo samakhonsathi - izinkulungwane eziyi-15. Futhi eminyakeni engama-20 edlule yobomi bakhe, lo mfazi ubelokhu enenkinga yesifo sikashukela.
UNick Jonas - Ilungu leqembu UJonas Brothers. Insizwa ebukekayo iyazi ukuthi ingakwenza kanjani ukujabulisa izixuku zamantombazane. Kusukela eneminyaka eyi-13, ube nesifo sikashukela sohlobo loku-1. UNick uhlala enza umsebenzi wokupha ngesisa, esekela ezinye iziguli.
U-Elvis Presley wayengomunye wabaculi abadumile nabathandwayo besikhathi sonke . Kuyenaukwazile ukuba yisithonjana sangempela sesitayela, umdanso nobuhle. Umculi usephenduke insumansumane. Kepha iqiniso lokuthi uPresley wayenesifo sikashukela alizange lidalulwe. Ukuhlanganisa impilo yomphakathi enempilo kanjalo nokwelashwa kokugula okungathi sína kunamandla wonke umuntu.
UPele - Omunye wabadlali bebhola abadume kakhulu. Wakha isifo sikashukela ebusheni bakhe.
ISkier UChris Freeman Unenkinga yesifo sikashukela sohlobo 1, kodwa lokhu akuzange kumvimbele ekumeleleni iMelika kuma-Sochi Olimpiki.
Umdlali weHockey onesifo sikashukela kusukela eneminyaka eyi-13 Bobby Clark kusuka eCanada. Ubuye wakugcizelela ukuthi ukudla kanye nemidlalo kuyasiza ukubhekana nalesi sifo.
Brit USteven Jeffrey Redgrave amahlandla ayisihlanu wanqoba igolide emihlanganweni yama-Olimpiki, ekilasini lokushayela phansi. Ngaphezu kwalokho, uthole indondo yesihlanu ngemuva kokuxilongwa isifo sikashukela sohlobo 1.
Umgijimi weMarathon Aiden bale bagijima ku-6500 km futhi banqamula izwekazi laseNyakatho Melika. Nsuku zonke, wayejova i-insulin kaningana. UBale uphinde wasungula iSikhwama Sokucwaninga Sikashukela, atshala imali yakhe uqobo kuyo.
Umdlali wetennis waseMelika UBill Talbert waba nesifo sikashukela seminyaka eyi-10 futhi waphila waze wafika ku-80. Uthole iziqu zezwe ezingama-33 e-United States.
Sean Busby - uchwepheshe weqhwa osezingeni eliphezulu.
UChris Southwell - I-snowboarder ngokweqile.
Ketil Moe - umgijimi womjaho owedlule lapho edluliselwa emaphashini. Ngemuva kokuhlinzwa waphinda waqhuba ezinye izimashi eziyi-12.
Matthias Steiner - isisindo, okwatholakala kuye isifo sikashukela eneminyaka eyi-18. I-Vice World Champ 2010
Walter Barnes - Umlingisi nomdlali webhola osephile nesifo sikashukela aze afike eminyakeni engama-80.
Nikolay Drozdetsky - isidlali se-hockey, umhlaziyi wezemidlalo.
U-Ernest Hemingway umbhali owadlula ezimpini ezimbili zomhlaba futhi wamukela umklomelo kaNobel Literature ngo-1954. Empilweni yakhe yonke, waba nezifo eziningi, kubandakanya nesifo sikashukela. UHemingway uthe isibhakela samfundisa ukuthi angalokothi adikibale.
O. UHenry wabhala izindaba ezingama-273 futhi waqashelwa njengomphathi wendaba emfushane. Ekupheleni kokuphila kwakhe, waba nesifo sokuqaqamba kwesibindi kanye nesifo sikashukela.
UHerbert Wells - Iphayona lesayensi yezinganekwane. Umbhali wemisebenzi efana ne- "War of the Worlds", "Isikhathi Somshini", "Abantu NjengoNkulunkulu", "Umuntu Ongabonakali". Umlobi wagula waba nesifo sikashukela cishe eneminyaka engama-60. Ubengomunye wabasunguli be-Diabetes Association of Great Britain.
Paul Cezanne - Umculi we-Post-impressionist. Isitayela sakhe sivezwa imibala "efiphele". Mhlawumbe lokhu kwabangelwa ukungaboni kahle - isifo sikashukela.
UDuvalier ungumbusi wobushiqela waseHaiti.
UJoseph Broz Tito - Udelele wobushiqela uYugoslav.
UKukrit Pramoy yindodana yeNkosana yaseThailand noNdunankulu.
UHafiz al-Assad - uMongameli weSyria.
U-Anwar Sadat, uGamal Abdel Nasser - Abaongameli BaseGibhithe.
UPinochet ungumbusi wobushiqela waseChile.
UBettino Craxi usopolitiki wase-Italy.
I-Menachem Start - UNdunankulu wase-Israeli.
UVinnie Mandela ungumholi waseNingizimu Afrika.
UFahd uyinkosi yaseSaudi Arabia.
UNorodom Sihanouk - inkosi yaseCambodian.
UMikhail Gorbachev, uYuri Andropov, uNikita Khrushchev - Onobhala Jikelele beKomiti Eliphezulu leCPSU.
Osaziwayo abanesifo sikashukela
Umlingisi owina umklomelo ka-Oscar umemezele ukuthi unesifo sikashukela sohlobo 2 ngesikhathi umphathi we-TV uDavid Letterman ephawula ngesibalo sakhe esincane ngo-Okthoba 2013.
“Ngiye kudokotela, wathi:“ Ngabe uyakhumbula amazinga aphezulu kashukela obelokhu uneminyaka engaba ngu-36 ubudala? Siyakuhalalisela. Unesifo sikashukela sohlobo 2, nsizwa. ” UHanks wengeze ngokuthi lesi sifo sisaphethwe, kodwa wahlekisa wathi ngeke esabuya nesisindo ayenaso esikoleni samabanga aphezulu (ama-44 kg): "Bengiwumfana omncane kakhulu!"
Hlangana nabanye abaphumelele eMiklomelweni Yeziqu Zesifo Sikashukela sohlobo 2. Khohlwa inhlebo yokuthi uHolly Berry ukhansele i-insulin yakhe futhi washintsha isuselwa ku-Type 1 sikashukela uhlobo 2 sikashukela - akunakwenzeka lokho.
Abantu abanesifo sikashukela sohlobo 1 abakwazi ukwenza i-insulin, ngakho-ke badinga imijovo yaleli hormone ukuze baphile. Abanye abantu abanesifo sikashukela sohlobo 2, ngaphezu kwemithi yomlomo, nabo badinga i-insulin ukulawula ushukela wegazi labo. Kepha abantu abaningi abanesifo sikashukela sohlobo 2 bangaphila ngaphandle kwemijovo ye-insulin, ngokungafani nalabo abanesifo sikashukela sohlobo 1.
Inkosi enkulu uLarry
Umsingathi wezinkulumo unesifo sikashukela sohlobo 2. "Lesi sifo siyelapheka impela," kusho uLarry King embukisweni wakhe. Isifo sikashukela sikhulisa ubungozi besifo senhliziyo, isifo sezinso, unhlangothi, nezinye izifo ezingathi sína.
ULarry King wahlinzwa - edlula emithanjeni yenhliziyo yenhliziyo. Isifo sikashukela akuyona ukuphela kwento eyandisa ubungozi bezinkinga zenhliziyo - uLarry King wabhema kakhulu, futhi ukubhema kulimaza kakhulu inhliziyo. Kepha, ngokunakekela isifo sakhe sikashukela nokuyeka ukubhema, uLarry King wasiza inhliziyo yakhe nawo wonke umzimba.
Umlingisi ophakanyiswe igama lika-Oscar wayenenkinga yesifo sikashukela sokukhulelwa, esabonakala ngesikhathi sokukhulelwa, elindele ukuzalwa kwendodakazi yakhe, uValentina.
USalma Hayek unomlando womndeni onesifo sikashukela. Ochwepheshe bathi bonke abesifazane kufanele bahlolwe ukuthi banesifo sikashukela sokukhulelwa emavikini angama-24-28 wokukhulelwa.
Abesifazane abasengozini enkulu yesifo sikashukela sohlobo 2 bahlolwa ekuvakasheni kwabo kokuqala kokubeletha. Isifo sikashukela sokuzivocavoca sivame ukunyamalala ngemuva kokubeletha, kepha singabuya ngesikhathi sokukhulelwa okulandelayo. Kungangeza futhi nengozi yokuba nesifo sikashukela sohlobo 2 empilweni yakamuva.
Umlobi wesiNgisi kanye nomphakathi. Umbhali wezinganekwane ezidumile zesayensi "Umshini wesikhathi", "Umuntu ongabonakali", "War of the Worlds" nabanye. Ngo-1895, iminyaka eyi-10 ngaphambi kuka-Einstein noMinkowski, wamemezela ukuthi iqiniso lethu lingokwesikhala sesikhathi sesine (“Isikhathi Somshini”).
Ngo-1898, wabikezela ngezimpi esebenzisa amagesi anobuthi, izindiza, namadivayisi anjenge-laser (War of the Worlds, ngemuva kwesikhashana, Lapho Lowo Olele Ukuvuka, Impi Emoyeni). Ngo-1905 wachaza impucuko yezintuthwane ezihlakaniphile ("The Kingdom of Ants").
Ngo-1923, owokuqala wethula imihlaba efanayo ngokulandelana (“Abantu NjengoNkulunkulu”). U-Wells wabuye wathola imibono eyaphindwaphindwa ngamakhulu ababhali, njenge-anti-amandla adonsela phansi, umuntu ongabonakali, ijubane lempilo, nokuningi.
Isifo Sikashukela Nobuciko
Iziguli eziningi ezinesifo sikashukela zitholakala ezimpilweni zethu kuthelevishini. Lawa ngabalingisi bemidlalo yaseshashalazini nabalingisi bamafilimu, abaqondisi, abethuli bezinhlelo zethelevishini nemibukiso yezingxoxo.
Osaziwayo abanesifo sikashukela abavami ukukhuluma ngemizwa yabo yangempela ngalesi sifo futhi ngaso sonke isikhathi bazama ukubukeka bephelele.
Izazi zesifo sikashukela esidumile ezigula ngale ndlela:
USylvester Stallone ungumlingisi odume umhlaba wonke onenkanyezi kumamuvi ezenzo. Ungomunye walabo bantu abanohlobo lwesifo sikashukela esincike ku-insulin. Ababukeli akulindelekile ukubona iStallone mayelana nokuba khona kwesifo esibi kangaka.
Umlingisi owathola i-Oscar, uHolly Berry, oshukela wakhe waziveza eminyakeni eminingi edlule. Ifunda ngokukhula kwe-pathology, intombazane ekuqaleni yathukuthela kakhulu, kepha yakwazi ukuzidonsela ndawonye. Ukuhlaselwa kokuqala kwenzeka eminyakeni engamashumi amabili nambili esechungechungeni oluthi "Living Dolls". Kamuva, ochwepheshe bezokwelapha bathola isimo sokukhubazeka kwesifo sikashukela. Namuhla, uBerry ubamba iqhaza kwi-Association of Juvenile Diabetes, futhi futhi uchitha amandla amaningi ezifundweni zesisa. I-American American yaba yimodeli yokuqala emnyama ukwethula i-United States ekhasini le-Miss World yobuhle.
I-Star Sharon Stone nayo ine-mellitus encike kushukela. Ngaphezu kwalokho, i-asthma ye-bronchial iphakathi kwezifo zayo ezihambisana nayo. Ngasikhathi sinye, uSharon Stone uqapha ngokucophelela indlela yakhe yokuphila, edla ngendlela efanele futhi edlala nemidlalo. Njengoba isifo sikashukela sohlobo loku-1 sinenkinga ehlukahlukene, uSharon Stone usevele waba nesifo sohlangothi kabili. Kungakho, namuhla, umlingisi engeke azinikele ngokuphelele kwezemidlalo futhi washintshela ohlotsheni lomthwalo olula - amaPilates.
UMary Tyler Moore ungumlingisi owaziwayo, umqondisi kanye nomkhiqizi wamafilimu ophumelele imiklomelo ye-Emmy neGolden Globe. UMary wake wahola i-Youth Diabetes Foundation. Isifo sikashukela so Type 1 simphelezela impilo yakhe yonke. Wenza umsebenzi wokupha ngesisa ukuxhasa iziguli ezinokuxilongwa okufanayo, esiza ngezimali ocwaningweni lwezokwelapha kanye nasekuthuthukiseni izindlela ezintsha zokwelapha i-pathology.
I-cinema yaseRussia isanda kufaka ifilimu ebizwa ngokuthi yi-Diabetes. Isigwebo sikhanseliwe. " Izindima ezinkulu zingabantu abadumile abanesifo sikashukela. Okokuqala, ubuntu obuvelele njengoFedor Chaliapin, uMikhail Boyarsky no-Armen Dzhigarkhanyan.
Umqondo omkhulu odlula ngokuqoshwa kwesiqeshana se-movie wawungulesi sisho esithi: "Asikwazi ukuzivikela manje." Le filimu ikhombisa ababukeli bayo ngentuthuko kanye nemiphumela yalesi sifo, ukwelashwa kwezifo ezweni lethu. U-Armen Dzhigarkhanyan ubika ukuthi ubhekisisa ukutholakala kwakhe njengomunye umsebenzi.
Ngemuva kwakho konke, isifo sikashukela senza umuntu ngamunye enze imizamo emikhulu kuye, ngendlela yakhe ejwayelekile yokuphila.
Ngabe isifo sikashukela nemidlalo ziyahambelana?
Izifo azikhethi abantu ngokuya ngesimo sabo sezinto ezibonakalayo noma isimo emphakathini.
Izisulu zingaba ngabantu banoma imuphi unyaka nobuzwe.
Kungenzeka yini ukudlala ezemidlalo futhi ubonise imiphumela emihle ngokuxilongwa kwesifo sikashukela?
Abasubathi abanesifo sikashukela abaye bafakazela umhlaba wonke ukuthi i-pathology ayisona isigwebo futhi noma ungaphila nayo ungaphila impilo ephelele:
UPele ungumdlali webhola odumile emhlabeni. Izikhathi zakhe zokuqala ezintathu wanikezwa isihloko sokuba ngumpetha womhlaba ebholeni. UPele udlale imidlalo yamashumi ayisishiyagalolunye nambili eqenjini lesizwe laseBrazil, washaya amagoli angamashumi ayisikhombisa nesikhombisa. Isidlali sikashukela sivela eminyakeni yobusha (kusukela eminyakeni eyi-17). Umdlali webhola odumile emhlabeni uqinisekiswa ngemiklomelo efana "nomdlali webhola ongcono kunabo bonke kuleli khulu lamashumi amabili eminyaka", "iqhawe lomhlaba lomhlaba"
UChriss Southwell ungumgibeli weqhwa osezingeni lomhlaba. Odokotela bathole ukuthi i-mellitus encike kwisifo sikashukela, engazange ibe yisithiyo somsubathi ukuze athole imiphumela emisha.
UBill Talbert useneminyaka eminingi edlala ithenisi. Uzuze iziqu ezingama-30 zohlobo lukazwelonke e-United States of America. Ngasikhathi sinye, waphinda futhi waba ngumpetha owodwa emncintiswaneni wezwe lakubo. Eminyakeni yama-50 yekhulu lamashumi amabili, uTalbert wabhala incwadi e-autobiographical, "Umdlalo Wokuphila." Ngenxa yethenisi, umsubathi wakwazi ukugcina ukukhula kwesifo okuqhubekayo.
U-Aiden Bale ungumsunguli we-Diabetes Research Foundation. Waduma kakhulu emuva komjaho odumile wamakhilomitha ayizinkulungwane eziyisithupha nengxenye.Ngakho-ke, wakwazi ukuwela izwekazi lonke laseNyakatho Melika, ezijova nsuku zonke esebenzisa i-insulin.
Ukuzivocavoca ngaso sonke isikhathi kubonisa umphumela omuhle wokwehlisa ushukela wegazi. Into esemqoka ukubheka njalo izinkomba ezidingekayo ukuze ugweme i-hypoglycemia.
Izinzuzo ezinkulu zomsebenzi owenziwe ngokomzimba ku-mellitus yesifo sikashukela ukunciphisa ushukela wegazi kanye ne-lipids, umphumela onenzuzo wezitho zesistimu yenhliziyo, ukuqina kwesisindo nokungathathi hlangothi, kanye nokwehla kwengozi yezinkinga.
Osaziwayo abanesifo sikashukela kuyavela kule vidiyo kule ndatshana.
Yiziphi izimbangela zokuqalwa kwalesi sifo?
Thayipha isifo sikashukela sokuqala, njengomthetho, siveza kubantu abasha. Lezi yiziguli ezingaphansi kweminyaka engama-30- 35, kanye nezingane.
Ukuthuthukiswa kwe-pathology kwenzeka ngenxa yokungasebenzi kahle ekusebenzeni okuvamile kwamanyikwe. Lo mzimba unesibopho sokukhiqiza i-hormone insulin ngenani elidingekayo kubantu.
Njengomphumela wentuthuko yalesi sifo, amaseli we-beta ayachithwa bese i-insulin ivinjelwe.
Phakathi kwezimbangela eziphambili ezingadala ukubonakaliswa kwesifo sikashukela sohlobo 1 yile:
Isakhi sofuzo noma into efayo kungavusa ukukhula kwesifo enganeni uma omunye wabazali enalo lolu hlobo lokuxilongwa. Ngenhlanhla, le nto ayiveli kaningi ngokwanele, kepha yandisa ubungozi besifo.
Ukuxineka kakhulu noma ukuphazamiseka kwemizwelo kwezinye izimo kungasebenza njenge-lever ezothuthukisa ukukhula kwesifo.
Izifo ezithathelwanayo ezisanda kuvela, ezifaka i-rubella, im Mumps, i-hepatitis, noma inkukhu. Ukutheleleka kuthinta kabi wonke umzimba womuntu, kepha amanyikwe aqala ukuhlupheka kakhulu. Ngakho-ke, amasosha omzimba womuntu aqala ngokuzimela ukubhubhisa amaseli alesi sitho.
Ngesikhathi sokukhula kwalesi sifo, isiguli asikwazi ukucabanga impilo ngaphandle kokujova i-insulin, ngoba umzimba wayo awunakukhiqiza le hormone.
Ukwelashwa kwe-insulin kungafaka la maqembu alandelayo ama-hormone alawulwa:
insulin emfushane ne-ultrashort,
kusetshenziswa i-hormone esezingeni eliphakathi kwezokwelapha,
insulin esebenza isikhathi eside.
Umphumela womjovo we-insulin emfushane ne-ultrashort ubonakala ngokushesha okukhulu, ngenkathi unesikhathi esifushane somsebenzi.
I-hormone ephakathi nendawo inamandla okunciphisa ukufakwa kwe-insulin egazini lomuntu.
I-insulin esebenza isikhathi eside ihlala isebenza usuku nosuku kuze kube ngamahora angamashumi amathathu nesithupha.
Umuthi ophathisiwe uqala ukusebenza cishe amahora ayishumi kuya kwayishumi nambili ngemuva komjovo.
Abantu abavelele baseRussia abanesifo sikashukela sohlobo 1
Osaziwayo abanesifo sikashukela ngabantu abaye bathola ukuthi kusho ukuthini ukuthuthukisa i-pathology. Ngokwesibalo sezinkanyezi, abasubathi kanye nabanye abantu abadumile, singakwazi ukwahlukanisa laba bantu balandelayo abaziwayo ezweni lethu:
UMikhail Sergeyevich Gorbachev ungumuntu obenesifo sikashukela sohlobo 1. Wayengumongameli wokuqala nowokugcina we-USSR yangaphambili
U-Yuri Nikulin ungumlingisi ovelele wesikhathi seSoviet, okhunjulwa ngakho konke ukuhlanganyela kwakhe kumafilimu anjenge- “The Arm Arm”, “The Caucasian Captment” kanye no- “Operation Y”. Bambalwa abantu ababazi ngaleso sikhathi ukuthi umlingisi odumile naye wanikwa isifo esidumazayo. Ngaleso sikhathi, kwakungeyona inkambiso ukwazisa ngezinto ezinjalo, futhi nangaphandle umlingisi wakhuthazelela zonke izinkinga nezinkinga ngokuzola.
Umculi wabantu weSoviet Union uFaina Ranevskaya wake wathi: "Iminyaka engu-85 nesifo sikashukela akuyona ihlaya." Izitatimende zakhe eziningi manje sezikhunjulwa njengama-aphorisms, futhi konke ngoba uRanevskaya wayezama njalo ukuthola into ehlekisayo nehlekisayo kunoma yisiphi isimo esibi.
Ngo-2006, kwatholakala ukuthi u-Alla Pugacheva wayenenkinga yesifo sikashukela esingaxineki ku-insulin. Ngasikhathi sinye, lo mculi, yize ethole ukugula enalesi sifo, uthola amandla okwenza ibhizinisi, anikele isikhathi kubazukulu bakhe nomyeni wakhe.
Isifo sikashukela phakathi kosaziwayo akusona isithiyo sokuqhubeka nokuphila impilo ephelele nokuba ngongoti emkhakheni wabo.
Umlingisi wamafilimu waseRussia uMikhail Volontir ubelokhu enesifo sikashukela sohlobo 1 isikhathi esithile. Ngasikhathi sinye, ubesanenkanyezi kumafilimu ahlukahlukene futhi ngokuzimeleyo wenza amaqhinga ahlukahlukene hhayi aphephile ngokuphelele.
Izinkanyezi, abadokotela abaziwayo besifo sikashukela wonke umuntu azi ngaso, bazitholile izindaba zokuxilongwa kwabo ngezindlela ezihlukile. Abaningi babo baphila ngokuya ngezincomo ezigcwele zabodokotela abakhona, abanye bebengafuni ukushintsha indlela yabo yokuphila ejwayelekile.
Kufanele futhi kukhunjulwe indoda, umculi odumile, uMikhail Boyarsky. Watholakala nesifo sikashukela ngaphezu kweminyaka engamashumi amathathu edlule. Umlingisi womhlaba wazizwa ngokuphelele kuye zonke izimpawu zalesi sifo.
Kokunye kokudutshulwa okuningi, uBoyarsky wagula kakhulu, amandla akhe okubona aya ngokuqina izinsuku eziningana, futhi kwavela ukuzwakala ngokweqile kwethambo lomlomo. Yilezi zinkumbulo umlingisi ahlanganyela ngazo ngaleso sikhathi.
Uhlobo oluncike ku-insulin lwe-pathology luphoqa u-Boyarsky ukuthi afake insulin nsuku zonke, elawula amazinga kashukela egazini. Njengoba wazi, izingxenye eziyinhloko zokwelashwa okuphumelelayo kwesifo sikashukela ukwelashwa kokudla, ukuzivocavoca nomuthi.
Naphezu kobucayi balesi sifo, uMikhail Boyarsky akakwazanga ukubhekana nokulutha kwakhe ugwayi notshwala, okucasula ukukhula ngokushesha kwe-pathology, njengoba umthwalo kuma-pancreas uyanda.
Ungayidla kanjani i-pasta yanoma iluphi uhlobo lwesifo sikashukela
Kungenzeka yini ukudla ipasta enoshukela, hhayi owokuqala kuphela, kodwa nohlobo lwesibili noma cha? Lo mbuzo ubuzwa iningi lalabo abagula yilesi sifo esiveziwe. Ngakolunye uhlangothi, baziwa njengokunye kokudla okunamakholishi aphezulu kakhulu nokuyingozi kakhulu. Kepha ngakolunye uhlangothi, ochwepheshe bayavuma ukuthi ukuzidla, njengamantongomane, akuvumelekile kuphela, kodwa futhi kuwusizo. Ngabe lezi zinqumo zigxile kuphi?
IMacaroni, edliwe kahle kushukela, kuzoba yindlela enhle yokusiza ukubuyisela impilo yesiguli. Iziguli, okugula kwazo kunganoma yiluphi uhlobo, azenzeki nje kuphela, kodwa ngaphezu kokusebenziseka kuzoba ukudla zonke izinhlobo zemikhiqizo ye-pasta, kodwa ngasikhathi sinye kufanele zibe nesilinganiso esibalulekile sefayibha. Lokhu yikho kanye okulahlekile kwepasta ejwayelekile.
Ekhuluma ngqo ngesifo sikashukela sohlobo 1, kungenzeka ngaphandle kwemikhawulo yokudla i-pasta enjalo. Ngaso leso sikhathi, kuyathandeka ukuthola isimo esisodwa: umzimba kumele uthole isilinganiso se-insulin, esizosinxephezela ngokuphelele. Mayelana nalokhu, futhi ucacisa umthamo, kubalulekile ukubonana nochwepheshe ozokusiza ekutholeni inkambo efanelekile.
Labo ababebhekene nesifo sikashukela sohlobo 2 babengenanhlanhla kangako, ngoba noma ikuphi, kufaka phakathi i-pasta enesilinganiso esibalulekile se-fiber, kuyinto engathandeki kubo. Isizathu salokhu kufanele sibhekwe neqiniso lokuthi isilinganiso sokusebenziseka kwemithamo ebalulekile yezinhlobo zezitshalo zomzimba asikhonjwanga ngokuphelele.
Kulokhu, akunakwenzeka ukusho ngokuqiniseka ukuthi uma kwenzeka kunesifo sikashukela sohlobo 2, umphumela kumuntu we-pasta onjalo uzoba muhle noma ungabi mubi, okubangela, ngokwesibonelo, ukulahleka kwezinwele. Kufakazelwa kuphela ukuthi:
lapho ufaka imifino,
Okunye ukuvezwa kwama-complexes e-Vitamin azosizakala.
Ungayisebenzisa kanjani i-pasta "enempilo"
Ngokungeziwe ku-fiber edingekayo kuso sonke isifo sikashukela, kufanele kuqashelwe ukuthi i-pasta yohlobo lwesifo sokuqala, njengeminye imikhiqizo yokudla equkethe isitashi, akufanele ifakwe ekudleni ukuze ilulame ushukela.
Imvamisa yokusetshenziswa kwayo kufanele ilawulwe kwiziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1, kanti nohlobo 2 sikashukela kufanele sehliswe ngesigamu.
Ngaphezu kwalokho, uzodinga ukufaka imifino kumenyu, njengoba kushiwo ngenhla.
Isimo siyefana nemikhiqizo yohlobo lwe-pasta equkethe i-bran. I-pasta enjalo ayinamandla kangako, kepha nokho yandisa isilinganiso se-glucose egazini. Vele, uma unikezwe lokhu, akunakwenzeka ukuthi ubabize umkhiqizo owusizo ngokuhlukile kunoma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela. Futhi lokhu kusho ukuthi kunemikhiqizo efanayo nayo yamukeleka impela, kepha ngaphansi kokuqondisa kukachwepheshe.
Uma uthatha i-pasta njengomkhiqizo enesilinganiso esandisiwe sama-carbohydrate asebenzayo, kuzodingeka ukhumbule okulandelayo. Udinga ukuba nomqondo onembe kakhulu we:
ngokushesha kangakanani umzimba okwazi ukwazisa imikhiqizo ye-pasta yesigaba esithile,
bangathinta kanjani inani likashukela egazini kushukela, hhayi nje kuphela kodwa nohlobo lwesibili.
Ohlelweni lwezifundo ezinje, ochwepheshe benze isiphetho esibaluleke kakhulu. Ingqikithi yayo ilele eqinisweni lokuthi kuzosiza kakhulu kulesi sifo esivelisiwe ukusebenzisa imikhiqizo eyenziwe ngokhuni oluyi-durum njengokudla.
Umkhiqizo onjalo ulusizo ngempela. Ngoba kungukudla okulula okungabhekwa cishe njengokudla. Inesitashi esincane kakhulu. Kuyaphawuleka ukuthi iqukethe ifomu elithile lohlobo lwekristali. Kulokhu, sithathwa ngokuphelele futhi masinyane. Ngaphezu kwalokho, i-pasta evela kulokhu okusanhlamvu ilungele noma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela ngenxa yokuthi igcwele ushukela "omncane", osiza njalo ukugcina isilinganiso esifanele se-insulin egazini.
Ehlelweni lokukhetha i-pasta enjalo, kunconywa ukuthi unake lokho okubhalwe ephaketheni. Kumkhiqizo wekhwalithi ephezulu kakhulu futhi "yesifo sikashukela", omunye umbhalo olandelayo kufanele ubekhona:
"Isigaba A group",
"Kwenziwe ngokhuni okusakhula",
"Semolina di graano".
Konke okunye ngeke kube wusizo kwabanesifo sikashukela sanoma yiluphi uhlobo, ngoba yi-pasta kuphela futhi ayinakwenza lutho ngamabele kakolweni.
Kulokhu, kuyadingeka futhi ukucacisa kahle ukuthi kufanele zilungiselelwe kanjani. Ngemuva kwakho konke, lo mzuzu kufanele uthathwe njengesisekelo. Ngoba imikhiqizo ephekiwe kahle izoba wusizo ngempela.
Ngakho-ke, la ma-pasta, njenganoma iyiphi enye, kufanele abiliswe. Okucashile akukhona amanzi kasawoti hhayi ukufaka u-oyela. Kepha okubaluleke kakhulu, akufanele ziqedwe ngokuphelele. Kulokhu, bazogcina inhlanganisela ephelele yamavithamini adingwa yilowo nalowo muntu onesifo sikashukela.
Kukhulunywa nangokulondolozwa kwamaminerali kanye ne-fiber. Ngakho-ke, i-pasta eyenziwe ngokhuni i-durum kufanele ibe nzima kancane ukunambitheka. Akufisi kangako ukuthi intsha. Okusho ukuthi, ukudla izolo noma ngisho nangemuva kwepasta kuyingozi.
Njengoba sengibapheke ngale ndlela, kuyadingeka ukuzisebenzisa ndawonye nemifino, ngaphandle kokudla inyama noma inhlanzi. Lokhu kuzokwenza ukuthi kunxephezelwe imiphumela yamaprotheni namafutha, kanye nokuvuselela amabhethri akho. Ngasikhathi sinye, ngaphandle kwezinzuzo zabo, ukuzidla kakhulu futhi akunconywa.
Isikhathi sokuphumula esifanele kungaba yizinsuku ezimbili, kanti kubalulekile ukunaka isikhathi sosuku.
Okuhle kunakho konke, uma ukusetshenziswa kwabo kuzoba ngesikhathi sokudla kwasemini, isidlo sakusihlwa kulolu hlelo asifanele ngokuphelele.
Ngakho-ke, i-pasta nokusetshenziswa kwayo kwanoma yiluphi uhlobo lokugula ushukela kuyamukeleka, kepha kufanele kulandelwe imithetho ethile. Zizosiza ekugcineni impilo futhi zithuthukise isimo sesifo sikashukela.
Osaziwayo abayi-10 abanesifo sikashukela
Isifo sikashukela asindeli muntu. Kuvame kakhulu ukwedlula indlela ebonakala kumlami olula. Osaziwayo nabo bayizisulu zalesi sifo. Kepha kaningi kunalokho, asikusoli lokhu.
Izifo ezingapheli zenza umuntu alwele impilo nsuku zonke. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngalezo zinketho ezidinga ukwelashwa nsuku zonke noma ezinye izindlela zokwelashwa. Isifo sikashukela singenye isifo esiyinkimbinkimbi. Ngendlela efanele, ayisongeli kakhulu impilo, kepha ukuhlupheka kuyanezela, nokuningi. Kunezinkanyezi eziyi-10 ebezihlale zinesifo sikashukela iminyaka.
UTom Hanks uphakathi kwama-megastars aseHollywood. Ukhulume ngokugula nesifo sikashukela ngo-2013. Watholakala enoshukela wegazi ophezulu kusukela aneminyaka engama-36 ubudala.
Odokotela basikisela ukuthi le nkinga iqhamuke ngenxa yokushintsha okubukhali kwesisindo ngenxa yezindima: UTom kwadingeka ukuthi athole isisindo noma anciphise umzimba ngesikhathi esifushane. Ama-Hanks kwake kwadingeka alahlekelwe ngokushesha amakhilogremu ayi-16. Lokho kuvivinya impilo yabo bekungelona ize. Iminyaka eminingi, umlingisi ubephila nesifo sikashukela sohlobo 2.
Umlingisi u-Anthony Anderson uthole ukuthi unesifo sikashukela sohlobo 2, eneminyaka engu-31. Kusukela lapho, uhlala ekhuluma nabalandeli ukubazisa ngendlela yokwelapha nokuvikela lesi sifo.
"Zonke izingane zase-Afrika zaseMelika ezizalwe namuhla zinamathuba angamaphesenti angama-50 okuthi zitholakale zinesifo sikashukela ngaphambi kweminyaka yobudala engama-20," kusho u-Anderson.
U-Anthony futhi ukhetha izindima zamaqhawe ngokugula okufana nokwakhe. Iqhawe lakhe u-Andrew Johnson ovela ochungechungeni oluthi "iBlack Comedy" uyagula futhi unesifo sikashukela.
Isangoma uNick Jonas uzwe izindaba zohlobo lwakhe lokuqala lwesifo sikashukela eneminyaka eyi-13, kanti futhi kufanele azithambise nge-insulin nsuku zonke. Kusukela ekuqaleni komsebenzi wakhe wezamabhizimusi, uNick ubelokhu efuna ukufundisa abantu abasha ngokuvimbela isifo sikashukela. Unesisekelo sakhe sokusiza esiza iziguli ezinje. UJonas usebenzisana nezinye izinhlangano ezifanayo.
UNick uthi kumele avakashele odokotela njalo bayobheka impilo yakhe. Futhi ngeminyaka, ukubonakaliswa kwalesi sifo kubonakala kakhulu.
Umethuli we-TV uSherry Shepperd wayenamazinga kashukela aphezulu cishe iminyaka eyisikhombisa, kepha isifo sikashukela asitholakalanga masinyane kuye. USherry unohlobo lwesibili. Wasithola lesi sifo kunina, owabulawa yizinkinga ezinzima zalesi sifo eneminyaka engu-41.
Ngaphandle kwalezi zimo, uMelusi isikhathi eside akazinakanga izimpawu eziyingozi: ukushuba emilenzeni, amabala grey phambi kwamehlo, ukoma ngokweqile. Kungemva kokuphoxeka kwabo lapho aphoqelelwa ukuba abonane nodokotela.
Umkhiqizi, umculi kanye nejaji lomdlalo wethelevishini waseMelika Idol wagula onesifo sikashukela sohlobo 2 ngenxa yokuthambekela kokudla. Ngo-2003, kwadingeka ukuthi ahlinzwe umsebenzi wokususa amafutha, ngemuva kwalokho alahlekelwe ngamakhilogremu angama-52.
Lokhu akuzange kusize ekugwemeni lesi sifo, ngoba futhi unesifiso sofuzo kuso. Njengamanje, uRandy uzama ukuphatha isimo sakhe, unamathela ekudleni okuqinile, edlala ezemidlalo.
Inkanyezi yaseHollywood uHalle Berry ubelokhu enesifo sikashukela sohlobo 2 kusukela wayeneminyaka engu-19 ubudala. Ekuqaleni, kwatholakala ukuthi lesi sifo sitholile. Kepha ngokuhamba kweminyaka, wakujwayela ukuthi ekudleni kwakhe cishe akunawo ushukela.
UHalle uzama ukuhola impilo enempilo, uzama ukungaboni ukuthi kugula kwakhe kuyini. Ubuye afundise izingane ukuthi zidle ziphilile zisencane, zibambe iqhaza ezinhlelweni zokufundisa umphakathi ngobunzima.
Umdwebi wezinganekwane nomculi oholayo webhendi Poison, uBret Michaels, ubephila nesifo sikashukela sohlobo 1 kusukela eneminyaka eyisithupha. Kufanele enze imijovo emine ye-insulin ngosuku, alinganise ushukela wegazi wakhe amahlandla ayisishiyagalombili. U-Bret ngesihle uxhasa izisekelo zomusa olekelela ukusiza abagulayo bakhe njengaye.
Umlingisi uVanessa Williams ukhulume iqiniso ngokugula kwakhe ngonyaka ka-2012, kumdlalo obizwa ngokuthi "angazi nakancane." Inkanyezi yochungechunge oluthi “Owesifazane Basekhaya Abasweleyo” inesifo sikashukela sohlobo loku-1.
Ukwesekele ngokukhulu ukucophelela isifo sikashukela impilo yakhe yonke, usiza izisekelo zomusa ukukhulisa imali, futhi wazise abalandeli ngalesi sifo. UWill waphinde wabhala incwadi ekhethekile yezingane ebizwa ngokuthi i-Healthy Baby.
Isangoma u-Chaka Khan waphoqeleka ukuthi adle ukudla okwenziwe nge-vegan ukulawula isisindo sakhe. Ukugwema amafutha ezilwane nenyama kusiza nokugcina umfutho wegazi ojwayelekile. Inkanyezi inesifo sikashukela sohlobo 2, izindaba zokuxilongwa zimenze ukuthi alahlekelwe ngamakhilogremu angama-35 ngonyaka.
UKhana ulokhu ezivivinya njalo ngokudla. Kwaphela unyaka wonke edla kuphela uketshezi. Wenqabile nokudla okuphathelene nokolweni nama-dessert-e-carbohydrate-rich.
UNdunankulu waseBrithani uTheresa May wafunda ngesifo sikashukela ngonyaka ka-2012. Ngemuva kwalokho waqala ukwehla ngokweqile futhi wayomile njalo. Ukuhambela udokotela ngephutha kwaba yinkinga kuye: uthole ngalesi sifo ngokuzumayo.
Washaqeka ngoba ecabanga ukuthi konke okwenzeka kuye kungumphumela wengcindezi enkulu. Kwavela ukuthi unesifo sikashukela sohlobo 1. Ngokubona kwakhe, ithonya lezepolitiki likaMeyi alinawo umthelela emsebenzini wepolitiki kaMay.
Thayipha isifo sikashukela 1 kosaziwayo: Yibaphi abantu abadumile abanesifo sikashukela?
Isifo sikashukela i-mellitus sithathwa njengesifo esivame kakhulu emphakathini wanamuhla, ongagcini muntu.
Izakhamizi ezijwayelekile noma abantu abadumile abanesifo sikashukela sohlobo loku-1, wonke umuntu angaba isisulu se-pathology. Yikuphi osaziwayo abanesifo sikashukela sohlobo 1?
Eqinisweni, baningi abantu abanjalo. Ngasikhathi sinye, bakwazile ukumelana nokushaywa futhi baqhubeka nokuphila impilo egcwele, bazivumelanisa nalesi sifo, kodwa bafinyelela izinhloso zabo.
Kungani kuvela isifo sikashukela sohlobo loku-1 futhi impilo yomuntu iguquka kanjani ngemuva kokuxilongwa?
Iziphi izithelo ezomisiwe engingazidla ngokuxilongwa kwesifo sikashukela sohlobo 2
I-Oatmeal yesifo sikashukela
Izidakamizwa zokuncipha kwesisindo sikashukela
Yimaphi amabele angadonsa ushukela